NYI LYNN SECK 18+ DEN: March 2009
ကျွန်တှောတို့ လပွတဿတာကို သွားမယ်ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း မိတ်ဆွေဟောင်းကြီး စွမ်းအားရှင်ကားကိုပဲ စီးကြရတယ်။ တစ်ယောက်ကို ခုနစ်ထောင်။ ကားတွေကလည်း အရင်ကလို စုတ်စုတ်ပဲ့ပဲ့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းတာက အခုနောက်ပိုင်း လူသိပ်မကျပ်တော့ဘူး။ ဖိုးသူတှောဆို ဘေးနားကလူ ထသွားလို့ စောစောစီးစီး ချောင်ချောင်ချိချိ နေရရှာတယ်။ ကျွန်တှောတို့ကတော့ အိမ်မဲလောက်ရောက်မှ နောက်ခုံတွေ လူလွတ်သွားတာနဲ့ ရွှေ့ထိုင်ကြတယ်။ ကျွန်တှော့ နောက်ကျောက ဒဏ်ရာရှိတာမို့ အကြာကြီးထိုင်ပြီး သွားရတဲ့ ခရီးမျိုးဆို အဆင်မပြေဘူး။ ဟိုးတုန်းကဆို လပွတဿတာမှာ ကြိုက်သလောက် အလုပ်လုပ် အပင်ပန်း ခံနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်နဲ့ လပွတဿတာ ကားစီးရမယ်ဆိုရင် ငရဲပြည် သွားရသလို အောင့်မေ့တယ်။ ညနေ ရနာရီလောက်က ခံရတဲ့ဒုကဿခ မနက် ၆နာရီထိုးမှ ပျောက်သွားတာကိုး။ ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ အားတက်နေရယ်၊ အသစ်လို ပြန်ဖြစ်နေလို့ရယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ စုစုဝေးဝေး ပါလာတာရယ်ကြောင့် သိပ်မသိသာလိုက်ဘူး။
ကျွန်တှောတို့ ကားဂိတ်က စထွက်တော့ ညခုနစ်နာရီခွဲလောက် ဖြစ်နေပြီ။ ၉နာရီကျှောကျှော လောက်ကျတော့ ညောင်တုန်းကို ရောက်တယ်။ အဲဒီအထိ လမ်းက အိုကေတယ်။ ကျောင်းကုန်း-အိမ်မဲ လမ်းကတော့ တှောတှောဆိုးနေဆဲပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကားလမ်းဘေးက မြင်ကွင်းလေးကို ကျွန်တှော အရမ်းသဘောကျတယ်။ လကလည်း တှောတှောသာတယ်။ လယ်ကွင်းတွေက မျက်စိတဆုံး။ တခါတခါ လယ်ကွက်တွေ ကြားထဲမှာ အုတ်ဂူလေးတွေကို တွေ့ရတယ်။ မီးဖိုလေးတွေနဲ့ ထိုင်နေသူတွေ တွေ့ရတယ်။ ကားလမ်းနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရွာလေးတွေကနေ မီးရောင်ပျပျလေးတွေလည်း မြင်နေရတယ်။ ကျွန်တှော တစ်လမ်းလုံး မအိပ်ဘဲ ဒီမြင်ကွင်းလေးတွေကို ထိုင်ခံစားနေမိတယ်။ ဝတဿထုလေး တစ်ပုဒ် ရေးချင်တဲ့အတွက် ဇာတ်လမ်းကျောရိုးကို စဉ်းစားနေခဲ့တာ ဟိုးနာဂစ်ကာလ ကတည်းက။ ဒီနေ့တော့ လရောင်နဲ့ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ ရှိတာမို့ ဉာဏ်လေးက ကွန့်မြူးနေတာပေါ့။ ကားလမ်းက အခုလို နွေရာသီ ဆိုတော့ ဖုံတွေက တထောင်းထောင်း ထနေတယ်။ အဲယားကွန်းဘတ်စ်လို့ အမည်တပ်ထားတဲ့ ကျွန်တှောတို့ ကားကြီးဟာ ဖုံတွေနဲ့ လေကို တသောကြီး အထဲကို ဆွဲဆွဲယူလာပြီး ခရီးသည်တွေရဲ့ နှာခေါင်းတွေ ပါးစပ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ အသက်တောင် မနည်းရှူနေရတဲ့ ဘဝ။
ကျွန်တှောတို့ လပွတဿတာရောက်တော့ မနက် ငါးနာရီလောက်ဆိုတော့ အရမ်းကို စောနေသေးတယ်။ လူတွေကတော့ တှောတှော ပင်ပမ်းနေကြပြီ။ ဒါနဲ့ကားဂိတ်နားမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ တီးဆိုင်လေး ထိုင်ပြီး မနက်စာ စားကြတယ်။ ကျွန်တှောရယ် ကိုမျက်လုံးရယ်က မြို့ကို ပတ်ကြည့်တယ်။ စိုးကြီးက လှေသွားရှာတယ်။ ကျွန်တှောတို့ တစ်ခါတည်း ရွာကို ဆင်းကြမယ်။ ကံတွေရဲ့ ဆုံချက်က အံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းတယ်။ လှေဆိပ်မှာ ကုကဿကိုရွာက ကျွန်တှောတို့ ရောင်းရင်းကြီး ကိုမျိုးနိုင်နဲ့ တွေ့တယ်။ ကျွန်တှောတို့ကို ဝမ်းပန်းတသာ နှုတ်ဆက်ရှာတယ်။ ကုကဿကိုမှာလည်း အိမ်လေးတွေ အဆင်ပြေနေသေးတဲ့အကြောင်း ပြောပြတယ်။ ရွာကို ဖျက်ပြီးပြောင်းဖို့ အမိန့်ပေးထားတယ်လို့လည်း သိရတယ်။ ကျွန်တှောတို့ကတော့ ရွာကို မဖျက်သေးခင် နေရာအသစ်မှာ ကိုယ်နေဖို့အိမ်တွေ အသင့်ရှိပြီလားဆိုတာ အရင်စစ်ဆေးဦးလို့ အကြံပေးခဲ့တယ်။ မဟုတ်ရင် သူတို့ ဘယ်လို အိမ်ပြန်ဆောက်မှာလဲ။ သူက ကုကဿကိုကို လာဖို့ ခှေါနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုကဿကိုကို သွားတဲ့ဘက်က ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ် ဖြစ်နေတာမို့ ဆိပ်ကလေးဘက်ကိုပဲ သွားကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အချိန်လည်း မမီဘူး။ လှေငှားတော့လည်း မိတ်ဆွေဟောင်းကြီး ကိုကတုံးနဲ့ ပြန်တွေ့ပြန်တယ်။ သူက တှောတှောအဆင်ပြေနေပြီ။ နာဂစ်တုန်းက လှေတစ်စင်းကလွဲပြီး ရှိသမျှအားလုံး ဆုံးရှုံးသွားတဲ့သူ။ အခုတော့ လှေနှစ်စင်းပိုင်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ကားဝယ်ဖို့တောင် စဉ်းစားနေသတဲ့။ ဒီလူက တကယ်ကို ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အလုပ်လုပ်တဲ့သူ။ သူစပ်ပေးတဲ့ လှေသမား တစ်ယောက်နဲ့ ကျွန်တှောတို့ ချီတက်ကြတယ်။
ဆိပ်ကလေး သွားလမ်း တလျောက်မှာတော့ ပင်ပန်းလွန်းလို့ အိပ်ပျှောသွားတယ်။ လှေပျက်နေတာလည်း ကျွန်တှော မသိလိုက်ဘူး။ ရွာရောက်ခါနီးလောက်မှ နိုးလာတယ်။ ရွာကို လှမ်းမြင်တော့ တှောတှောပျှောသွားတယ်။ တရွာလုံး ပြာနေသေးတာကိုး။ ရွာထိပ်မှာက ကင်းစင်နဲ့ဘာနဲ့။ ရွာက လေးထောင့်စပ်စပ် အကွက်ကျကျ ဖြစ်နေပြီ။ လမ်းတွေ၊ မြောင်းတွေ၊ မီးတား မီးကပ်တွေနဲ့ ဟုတ်လို့။ ဒါနဲ့ ရွာလူကြီးအိမ်ကို သွားကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း နေ့လည်စာ စားကြတာပေါ့။ အရင်တုန်းကတည်းက သူတို့အိမ်မှာ စားနေကျ။ စားရင်းသောက်ရင်း စကားပြောဖြစ်တော့မှ ရွာဆရာတှောက အရင်ရွာတည်နေပုံက မကောင်းဘူးဆိုပြီး ပြင်ခိုင်းလို့ အိမ်တွေကို အလုံးလိုက်မပြီး ရွှေ့ထားကြတာတဲ့။ ကျွန်တှော သဘော တှောတှော ကျသွားတယ်။ ရွာတွေမှာ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ ဩဇာဟာ ထက်နေဆဲပဲ။ ကျွန်တှောတို့ လုပ်တုန်းက ဒီလိုလုပ်ပါ ဒီလိုလုပ်ပါလို့ အခါတစ်သန်း ပြောတာတောင် ဂျေးများနေတဲ့သူတွေ အခုတော့ ဘုန်းကြီးစကား တစ်ခွန်းနဲ့ ပြီးသွားရော။ ကောင်းတယ်။ သူတို့ ရွာလေး စနစ်တကျ ဖြစ်နေတာ မြင်ရတော့ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဦးဘိုနီအိမ်မှာ ကျွန်တှောတို့အားလုံး ထမင်းစား ကျောဆန့် လုပ်ခဲ့ကြသေးတယ်။ ပြီးတော့ ရွာလူကြီးအသစ် ဦးအောင်မြင့် ရောက်လာတယ်။ သူကလည်း ဇနဲ့။ ရွာမှာ ဦးအောင်မြင့်ဆို တှောတှော ကြောက်ကြတယ်။ လက်စွမ်းကလည်း ထက်သလားတော့ မမေးနဲ့။ ကျွန်တှောတို့နဲ့ကတော့ ပလဲနံပ သင့်ပါတယ်။ သူရောက်လာတော့ အခက်အခဲတွေကို ပြောပြတယ်။
ပြသဿသနာက ပေးတာတွေကတော့ ပေးကြတယ် ဒါပေမယ့် တကယ့် လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ နဲနဲလွဲနေသတဲ့။ ဥပမာ သူတို့ဒေသသုံးတာက ၁လက်မပိုက်ဆိုရင် ရတာက ၂လက်မပိုက်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ လှေဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ လွဲနေတယ်ပေါ့။ ဒီတော့ သူတို့တွေ ဘာလုပ်ကြရသလဲဆိုတော့ အဲဒါတွေကို ယူပြီး ပြန်ရောင်းစား၊ ရတဲ့ငွေလေးကိုစု တခြားဟာတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ကိုယ်လိုအပ်တာကို ဝယ်ရတယ်ပေါ့။ ပြီးတော့ ရွာသားအချင်းချင်း ခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေက ရှိသေးတယ်။ အစိုးရက ပစဿစည်းတွေ ချပေးတဲ့အခါ ရွာသားတွေ လျှောက်ချင်ရင် ရပ်ကွက် ဥကဿကဋဿဌတွေဆီမှာ ထောက်ခံချက် လက်မှတ်ထိုးရတယ်။ ရပ်ကွက်ဥကဿကဋဿဌက လက်မှတ်တစ်ခါထိုး နှစ်ထောင် အနည်းဆုံး တောင်းတယ်။ ဒါက အခုမှ မဟုတ်ဘူး ကျွန်တှောတို့ ရှိကတည်းက အဲဒီအတိုင်းပဲ။ အဲဒီလို ခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား နှိပ်ကွပ်ပစ်သင့်တယ်။ အားလုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တှောတှောများများက အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်နေတယ်။ စဉ်းစားကြည့်တော့ သူလည်း ဒုကဿခခံရတဲ့ ရွာသား တစ်ယောက်ပဲ။ အဲဒါကို အချင်းချင်း ခေါင်းပုံဖြတ်တာ။ ဒါမျိုးတော့ ကျွန်တှောတို့က ရွံတယ်။ နောက်တစ်ခုက ပစဿစည်း သွားလျှောက်တော့ ရက်ချိန်းတွေ များလွန်းတာ။ မနက်ဖြန်မှ လာခဲ့ဆိုပြီး ချိန်းလွန်းတော့ သူတို့တွေ မြို့ကို သွားလာနေထိုင်ရတဲ့ စရိတ်နဲ့တင် တှောတှောလေး ထိကြတယ်လို့ ပြောပြကြတယ်။ နောက်တစ်ခုက လာလှူမယ်ပြောပြီး မလာကြတဲ့ အဖွဲ့တွေကိစဿစ။ ရွာသားတွေကတော့ လာမယ်ဆိုလို့ မျှောနေကြတယ်။ သူတို့ကတော့ ပှေါမလာဘူးတဲ့။ အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ ဘယ်နေ့ဆို ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရွာဆိုဘယ်ရွာ သေချာမှ ပြောသင့်တယ်။ မဟုတ်ရင် အိပ်မက်ပေးသလို ဖြစ်နေရော။ လိုအပ်တာတွေကို မှာစားပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်တှောတို့ ပြင်ကနုကုန်းကို ကူးကြဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီကနေ မထွက်ခင် ရွာအဝင်က သစ်ပင်ကြီးမှာ အေးရိပ်ဆာယာ ခိုလှုံပြီး အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသေးတယ်။ ဦးပေါက်ဖှောကြီးက ဘာပြောလဲဆိုတော့ မင်းတို့ဟာက ရွာ့ပြင်ထုတ် ခံထားရသလို ဖြစ်နေပြီတဲ့။ အဲဒါပြီးတော့ ကျွန်တှောတို့ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ သူတို့က ရွာမှာ ညအိပ်ဖို့ ပြောနေသေးတယ်။ ကျွန်တှောတို့ကတော့ မြို့ကိုပဲပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
လှေသမားကို ယုံစားပြီး လိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်တှောတို့ဟာ ကောင်းကောင်းကြီး ဒုကဿခရောက်ပါတော့တယ်။ စိုးကြီးကတော့ပြောသား။ လှေဆရာ လမ်းမှားနေပြီနဲ့တူတယ် ဆိုတော့ ဟိုရေကျှောက ဖြတ်လမ်းရှိတယ် ဘာညာနဲ့ ပြောပြီး မောင်းလိုက်တာ ၂နာရီလောက်အကြာ သတိရလို့ ပတ်ဝန်းကျင် ကြည့်မိတော့ မြင်ဖူးသလိုလို ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်နေရော။ မသကဿငာလို့ မေးကြည့်တော့ ဒရယ်ဖြူ ဖြစ်နေပါလေရောဗျာ။ တကယ်ဆို အဲဒီရွာက ဆိပ်ကလေးကနေသွားရင် မိနစ်၂ဝဆို ရောက်ပြီ။ အဲဒါကို လှေသမားဗျာ ဂငယ်ကွေ့ကြီး မောင်းနေလိုက်တာ နှစ်နာရီကျှော။ အချိန်ကုန်၊ ဆီကုန်၊ လူပမ်း တှောတှောလေး စိတ်ပျက်သွားတယ်။ ဒရယ်ဖြူမှာလည်း ကျွန်တှောတို့ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်လေးတွေ ရှိတယ်လေ။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ လှေပှေါကနေပဲ ကြည့်လိုက်တော့တယ်။ ဒါနဲ့ မထူးတော့ဘူးဆိုပြီး ဆက်သွားကြတော့ ရေကျချိန်နဲ့ တိုးသွားပြီလေ။ လှေက ရေကျှောချောင်းမှာ သောင်တင်သွားပါလေရော။ ဒါနဲ့ ချောင်းထဲဆင်း လှေကို ရွှေ့ကြရပြန်တယ်။ ရေပြန်တက်ချိန်ကို စောင့်နေရတာဗျာ တှောတှောကြာတယ်။ နေကလည်းပူ စားစရာကလည်း မရှိ။ ဖြတ်သွားတဲ့ လှေကလေးတွေတွေ့ရင် ငါးပါလား ဖားပါလားနဲ့ မေးနေရတယ် (ဖိုးသူတှော)။ အပျင်းပြေ ပါလာတဲ့ ဖဲထုပ်လေးဖြေပြီး ဖဲရိုက်လိုက်ကြတာ သတိတောင် မေ့သွားတယ်။ ၆နာရီကျှောမှ ရေတက်တယ်။ ကျွန်တှောတို့ ရွာရောက်တော့ ရနာရီ ထိုးတော့မယ်။
ကျွန်တှောတို့လှေ ကပ်လာတာမြင်တော့ လူတွေ ထွက်လာကြတယ်။ ပိုင်စိုး ဦးလေးတွေ အဖေတွေ အဖိုးတွေက ဝမ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုတယ်။ ချက်ချင်းကို ထမင်းကျွေးတော့တာပဲ။ ကျွန်တှောတို့လည်း ဗိုက်ဆာလွန်းလို့ ခေါင်းမဖှောတမ်း စားပစ်လိုက်ကြတယ်။ အိမ်တွေကနေ ဟင်းတွေ လာပို့ကြတယ်။ စားလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ မှတ်မှတ်ယယ သူတို့နဲ့ပဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ပြင်ထောင်တွင်းရွာ ဆင်းတော့လည်း နာဂစ်လွတ် ကြက်ကလေးကို ဆီပြန်ချက်ပြီး အုန်းဖူးနဲ့ ချက်ကျွေးတဲ့ နေ့လည်စာလေးကို အရမ်းသတိရမိတယ်။ အခုခေါက်လည်း စားလို့ ကောင်းပြန်ရော။ ပိုင်စိုး အဖေရော အဘရောက အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ကြပြီ။ ဟိုကောင်ကတော့ လူငယ်ဆိုတော့ အဲဒါကို ရှက်လို့တဲ့ အိမ်ကို မကပ်တော့ဘူး။ ငယ်သေးတာကိုး အရှက်နဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ခွဲခြား မသိသေးဘူး။ ထမင်းစားပြီးတဲ့နောက် ကှောဖီလေးသောက်ပြီး ကျွန်တှောတို့ စကားပြောကြတယ်။ သူတို့မှာ ရေအခက်အခဲ တှောတှော ဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ရွာကတော့ တှောတှောလေး စိုပြည်နေပြီ။ ဆိပ်ကလေးနဲ့တောင် မတူဘူး။ ဖြစ်ကာစက တစ်ရွာလုံး ပြုန်းသွားခဲ့တာ အခုဆို တှောတှော နာလံထူလာပြီလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ပိုင်စိုးအဘိုးက ကျွန်တှော့ကို လက်ဆွဲခှေါပြီး သူယူထားတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ဒါဒို့ရွာကို ပထမဆုံး အိမ်ဆောက်ပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေတဲ့။ ကျွန်တှော အဲဒါကြားရတော့ တှောတှောလေး စို့နင့်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ပြန်ခါနီးမှာ အဲဒီရွာက စာသင်ကျောင်းအတွက် ကျွန်တှောတို့ အလှူငွေ ထည့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တှောတို့ပြန်တော့ ညဂနာရီ ကျှောနေပြီလေ။
အပြန်လမ်း တလျောက်လုံး ဖောင်စီးရင်းရေငတ်ဆိုတဲ့ စကားကို စဉ်းစားနေမိတယ်။ ရေတွေတော့ ပတ်လည် ဝိုင်းနေတာပဲ သောက်စရာရေ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတာလေ။ ဘယ်လို ကူညီနိုင်မလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တော့ ဒါဟာ လွယ်ကူတဲ့ကိစဿစ မဟုတ်ဘူးလို့ အဖြေရတယ်။ ကိုယ်မတတ်နိုင်တဲ့ အရာတွေအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေလို့ ဘာမှ မထူးလာပါဘူးလေ။ စိတ်မကောင်းတာကနေ ပြောဆိုနေတာကနေ ဘာမှ ထွက်မလာဘူး။ ကိုယ်တတ်နိုင်တာလေး တစ်ခုခုနဲ့ အကျိုးပြုနိုင်ဖို့ စဉ်းစားကြည့် ကြတာပေါ့။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်ခင်ပါ။ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားပါ။
PS: ဒီနေ့ညနေ ကိစဿစတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တှော နေပြည်တှော ခဏ သွားပါမယ်။ တစ်ပတ်လောက် စာရေးဖြစ်ဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Posted by NLS at 3/18/2009 01:43:00 PM0comments Links to this post
Labels: Nargis, Travel
ခုတလော ဘာမှ ရေးချင်စိတ် မရှိပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ရှိနေတာတွေတော့ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် ရေးမထွက်ဘူး။ စာအုပ်တွေ အများကြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်။ မကြည့်တာ ကြာပြီးဖြစ်တဲ့ ဗွီဒီယိုတွေလည်း အချိန်ပေးပြီး ထိုင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအထဲက ထူးထူးခြားခြား စိတ်ထဲကို တိုးဝင်သွားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေအကြောင်း ရေးချင်လာတယ်။
ပထမကားက တွမ်ခရု ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Valkyrie ဆိုတဲ့ကား။ ဒုတိယ ကမဿဘာစစ်ကာလက နာဇီစစ်ဗိုလ်ချုပ် တစ်စုက အာဏာရှင် ဟစ်တလာကို လုပ်ကြံဖို့ ကြိုးစားတဲ့ ဇာတ်ကား။ တွမ်ခရုက ဗိုလ်မှူးကြီး စတပ်ဖန်ဘက် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်တယ်။ ဒီကားကို စရိုက်ကတည်းက ဂျာမဏီမှာ အခက်အခဲတွေ ကြုံရတယ်၊ အမျိုးမျိုးသော ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ ကြုံရတယ်ဆိုတာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ်ဆိုတာကို မြင်တဲ့လူတန်းစာက နှစ်မျိုးနှစ်စား ကွဲပြားနေလေတော့ တှောတှော အကျပ်အတည်းကြားက ရိုက်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါဟာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကားတစ်ကား ဖြစ်တာကြောင့် တှောတှောလေး သတိထားခဲ့ရ ပါလိမ့်မယ်။
အာဏာရှင် ဟစ်တလာကြောင့် ဂျာမဏီဟာ ဥရောပနဲ့သာမက တစ်ကမဿဘာလုံးနဲ့ပါ ရန်ဘက် ဖြစ်နေပြီး ကိုယ့်ပြည်သူ ပြည်သားတွေသာ အများဆုံး အထိနာနေတယ် ဆိုတာကို တွေ့ကြုံ ခံစားနေကြတဲ့ နာဇီတပ်တွင်းက တပ်မှူးကြီးတွေဟာ ဟစ်တလာကို လုပ်ကြံပြီး သူ့ရဲ့ SS ပါတီကို အရံတပ်မတှောနဲ့ အစားထိုးဖို့ Valkyrie ဆိုတဲ့ စစ်ရေးစီမံကိန်း တစ်ခုကို ဖှောဆောင်ကြတယ်။ SS ဆိုတာ ဂျာမန်လို Schutzstaffel (ရွှတ်စတာဖဲလ်) ကာကွယ်ရေးတပ်တှော (Protective Squadron) ကို ဆိုလိုပါတယ်။ အစီအစဉ်အရ တွမ်ခရုဟာ ဟစ်တလာကို အနီးကပ် လုပ်ကြံဖို့ တာဝန်ယူရသူ ဖြစ်တယ်။ တွမ်ခရု သရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ရုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး စတပ်ဖန်ဘဂ်ဟာ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အခရာ ပါပဲ။
ဟစ်တလာကို အရင်က ဘယ်လောက်ကြောက်ရတယ် ဆိုတာ ဒီဇာတ်ကား ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူပြောတဲ့စကား "I m untouchable" ဆိုတာကို တချို့က တှောတှောလေး ယုံကြည်ကြတယ်။ ယုံရလောက်အောင်လည်း ဟစ်တလာ ကံကောင်းခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တာကိုး။ ဒီအဖြစ်အပျက်မှာလည်း သေသေချာချာကြီး အစည်းအဝေးခန်းမှာ ပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါလျက်နဲ့ ဟစ်တလာဟာ သေဘေးကနေ လွတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဖြစ်နိုင်တာက အဲဒီ ဖောင်တိန်ကနေ ဖောက်ခွဲတဲ့ဗုံးဟာ အလုံပိတ် အခန်းဖြစ်နေဖို့ လိုတယ်လို့ Colonel Mertz von Quirnheim က ပြောခဲ့ပေမယ့် တကယ် အစည်းအဝေး လုပ်ကြတဲ့ အခါမှာတော့ ဟစ်တလာဟာ ပြူတင်းပေါက် ပတ်လည်ရှိနေတဲ့ အခန်းတစ်ခုထဲမှာ လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ပေါက်ကွဲအား နည်းသွားတယ်လို့ ထင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့တင် ဟစ်တလာ သေသွားပြီလို့ ထင်ခဲ့တဲ့ စတပ်ဖန်ဘဂ်တို့ အဖွဲ့ဟာ SS တပ်မတှော ဆီကနေ အာဏာသိမ်းဖို့ အမိန့်တွေထုတ်ပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်။ လုပ်ကြံသူ စတပ်ဖန်ဘဂ် ကိုယ်တိုင်ကတောင် ဟစ်တလာ သေသွားပြီလို့ပဲ ယုံကြည်ခဲ့ပေမယ့် ဟစ်တလာဟာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။ လွတ်မြောက်ရုံတင်မက သူက ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းအမိန့်ပေး လိုက်တာနဲ့ စတပ်ဖန်ဘဂ်တို့ရဲ့ အခြေအနေဟာ ချက်ချင်းကို ပြောင်းလဲသွားတော့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေ အားလုံး သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခံရတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဘာကို တွေ့ရသလဲဆိုတော့ တကယ်လို့သာ အားလုံးက ဟစ်တလာကို မကြောက်ရွံ့ဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ် ဆိုရင် အဲဒီလုပ်ကြံမှုကနေ ဟစ်တလာဟာ ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်။ နာဇီစနစ်ဟာ စောစောစီးစီး အမြစ်ပြုတ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အခုလို ဟစ်တလာဘက်က လူတွေ ရှိနေသေးတာမို့ သူတို့အကြံဟာ မအောင်မြင်ခဲ့ရတာပါ။
အားလုံးခြုံပြီး ပြောရရင်တော့ နာဇီစနစ်ဆိုးအောက်က မကောင်းတဲ့သူတွေ အာဏာ မက်မောသူတွေ ကြားထဲမှာ ပြည်သူလူထု အကျိုးကို ကြည့်သူတွေလည်း ရှိနိုင်သေးတာပဲလို့ ဒီဇာတ်ကားလေးက ပြောသွားတယ်။ ဒီလုပ်ကြံမှု မအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့် နောက်ကိုးလ ကြာတဲ့အချိန်မှာ ဟစ်တလာဟာ မဟာမိတ်တွေရဲ့ ထိုးစစ်ကို မခံနိုင်တော့ဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေသွားခဲ့တယ်။
သူတို့ဆီက ဇာတ်ကားတစ်ကားကို ဘယ်လောက်တောင် ဂရုစိုက်သလဲဆိုရင် ဇာတ်လမ်းမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့ မင်းသား တွမ်ခရုဟာ အပြင်က တကယ့် စတပ်ဖန်ဘဂ်နဲ့ တှောတှောလေး ပုံတူပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ခံအသံ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ရင်တထိတ်ထိတ် ဖြစ်လာအောင်ကို အဲဒီအသံက ဆွဲဆောင်သွားနိုင်တယ်။ စပါယ်ရှယ်အဖက်တွေ မိုးမွှန်အောင် များပြားနေတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဒီဇာတ်ကားကတော့ တှောတှော နည်းတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဇာတ်လမ်းအားဖြင့် ပြောရရင်တော့ ရိုးရှင်းတယ် သိပ်မရှုပ်ထွေးဘူး။ လုပ်ကြံတယ် မအောင်မြင်ဘူး နောက်ဆုံး သေသွားတယ် ဒီလောက်ပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဘာမှ မရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးက တလျောက်လုံး ဆွဲခှေါသွားတာကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်နေရတာကိုက ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အသက်ပါပဲ။ ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကမဿဘာကျှော ရှင်းဒလားလစ် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို သွားသတိရတယ်။ (အဲဒီစာအုပ်လေးလည်း ဘယ်ကောင် ဘတ်သွားတယ် မသိဘူး။ ရှာလို့ကို မတွေ့တော့ဘူး)
Posted by NLS at 3/18/2009 02:25:00 AM0comments Links to this post
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပါတ်က ကျွန်တှောတို့ လပွတဿတာကို ပြန်သွားခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တှောရယ်၊ ကိုမျက်လုံးရယ်၊ ဇိုးဇီယျရယ်၊ ဖိုးသူတှောရယ်၊ ကျှောဇေယျရယ်။ ဒီလိုသွားဖို့ကိုလည်း တှောတှော ကြိုးစားခဲ့ရတာပါ။ အဓိက ဦးတည်ချက်က ကျွန်တှောတို့ ဆောက်ခဲ့တဲ့ အိမ်လေးတွေ အခုထက်ထိ ခိုင်မခိုင် သိချင်တာရယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီရွာသားတွေ လက်ရှိ အခြေအနေရယ်ကို သိချင်တာရယ်ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အသွားအပြန် စုစုပေါင်း လေးရက် ကြာတယ်။ လပွတဿတာက မိတ်ဟောင်း ဆွေဟောင်းတွေကလည်း ဝမ်းပန်းတသာ နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ လပွတဿတာတောင် ကျွန်တှောတို့ ရှိစဉ်ကနဲ့ ပုံစံ သိပ်မတူတော့ဘူး နဲနဲပြောင်းသွားပြီ။ ပြောင်းသွားတယ် ဆိုတာက တိုးတက်လာတာကို ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်တုန်းက NGO တွေနဲ့၊ အလှူရှင်တွေနဲ့၊ လာကူညီသူတွေနဲ့ တရုံးရုံး ကာလတုန်းက ဆိုင်တွေလည်း အားကြီးပေါမှပေါ။ ည ၁၁နာရီ ဆိုရင်တောင် မြို့က မအိပ်ချင်သေးဘူး။ အခုတော့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ငြိမ်သက်သွားပြီပေါ့။
ကျွန်တှောတို့ သူငယ်ချင်း ငါးယောက် တည်းခိုခန်းလေး တစ်ခုမှာ တည်းဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ ရွာတွေဆင်းတယ်။ ပိုက်ဆံ အခြေအနေအရ ဆိပ်ကလေးနဲ့ ပြင်ကနုကုန်း နှစ်ရွာပဲ သွားနိုင်တယ်။ ဒရယ်ဖြူကိုတော့ လှေပှေါကနေပဲ ကြည့်နိုင်ခဲ့တယ်။ မမေ အလှူအတန်း လုပ်ဖို့ ပေးလိုက်တဲ့ ငွေတစ်သိန်းကိုတော့ အဲဒီနှစ်ရွာက စာသင်ကျောင်းနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လှူခဲ့တယ်။ ရွာလူကြီးတွေကို လက်ဆောင်ပေးတယ်။ ကလေးတွေကို မုန့်ဝေတယ်။ အလှူလုပ်ချင်ပေမယ့် ဘုန်းကြီးတွေ ရွာမှာ မရှိတာမို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်လိုက်တယ်။
အိမ်ကလေးတွေ တောင့်တင်း ခိုင်မာနေဆဲပါ။ ကျွန်တှောတို့ တတွတ်တွတ်နဲ့ လေးထောင့်စပ်စပ် တည်ပါလို့ ပြောခဲ့တာ မရတဲ့ရွာ၊ အခုတော့ ရွာဘုန်းကြီး အမိန့်ပေးလို့ စီစီရီရီနဲ့ စနစ်တကျလေး ဖြစ်နေပြီ။ အပူဒဏ်ကိုတော့ တာပှေါလင်စတွေက မတားနိုင်ဘူး။ ကံကောင်းသွားတာက ပတ်ပတ်လည်ကိုပါ တာပှေါလင် ကာထားတော့ သူတို့ အိမ်နံရံတွေကို ကြိုက်သလို ဖွင့်လို့ ရနေတာမို့ လေလေး တအေးအေးနဲ့ အများကြီး သက်သာသွားတယ်။ ထရံက တာပှေါလင်မိုး အိမ်တွေတော့ နဲနဲဒုကဿခရောက်ရှာကြတယ်။
ရွာသားတွေက ဝမ်းပန်းတသာ ကြိုဆိုကြတဲ့အခါ၊ ထမင်းဟင်း ချက်ကျွေးကြတဲ့အခါ၊ ကိုယ်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့ အိမ်လေးတွေ အခုထိ ခိုင်ခံ့နေသေးတာ တွေ့ရတဲ့အခါ၊ အဲဒီအိမ်တွေမှာပဲ အခုထက်ထိ နေနေကြသေးတာ တွေ့ရတဲ့အခါ ကျွန်တှော ပီတိဆိုတာကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားရတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တှောတို့က လုပ်အားစိုက်ပြီး ပီတိကို စားခဲ့တာပါ။ ဒါကို လှူခဲ့တဲ့ အလှူရှင်တွေလည်း ကျွန်တှောတို့ လိုပဲ ဒီလိုလေးတွေ မြင်ရတဲ့အခါ စိတ်ချမ်းမြေ့ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ပြင်ကနုမှာ စားခဲ့ရတဲ့ ညနေစာ ငါးသလောက်ဟင်းလေးကို သတိရမိတယ်။ ကျွန်တှောတို့ ထမင်းစားနေတုန်း ဘေးနားက ဗွီဒီယိုဆိုင်က တစ်ရွာလုံးကြားအောင် ဖွင့်နေတဲ့ ဂျောက်ဂျက်ရဲ့ ရော့ခြေမစုပ် ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ကြားမိတော့လည်း ရင်မောစွာနဲ့ ပြုံးမိခဲ့တယ်။ ဘဝတွေ။
ကျွန်တှောတို့ ရာထားတဲ့ လမ်းပှေါမှာ အသစ်ဖောက်ထားတဲ့လမ်း
စီစီရီရီ တဲအိမ်လေးတွေ အခုထက်ထိ ကောင်းနေဆဲပါ
ရွာလည်း အကွက်တကျ ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်ထားကြပြီ
ရွာသောက်ရေကန် အခုထက်ထိ အငန်မပြေသေးလို့ ရေဝယ်သောက်နေရ
ကျွန်တှောတို့ကို စားစရာတွေ အမြဲရှာကျွေးတတ်တဲ့ ဦးပေါက်ဖှော
ကျွန်တှောတို့ ရှိတုန်းက ရွာလူကြီးဟောင်း အဘဦးဘိုနီ
ရေကျနဲ့တိုးပြီး လှေသောင်တင်လို့ ရွှံ့ထဲဆင်းပြီး လှေကို ရွှေ့ရတယ်
နာဂစ်အမှတ်တရ အုန်းပင်ဖျားမှာ တက်စိုက်နေတဲ့ သံပြား
ကိုမျက်လုံး၊ ဖိုးသူတှော၊ ကျှောဇေယျ
ပြင်ကနုကုန်းကို လှေပှေါကနေ ဒီလိုမြင်ရတယ်
အန်ဂျီအိုတစ်ချို့ ဆောက်ပေးထားတဲ့ အိမ်လေးတွေ။
Posted by NLS at 3/17/2009 11:38:00 PM0comments Links to this post
Labels: Experience, Nargis, Travel
အထက်ကဟာက ၂ဝဝဂမှာ အင်တာနက် Search Engine တွေ အသုံးချမှုဇယား။ နာမည်ကြီး Google ကတော့ ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်လျက်ပဲ။ ဒီ Stat လေးတွေကို ကျွန်တှော သိပ်သဘောကျတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ISP တွေကနေ ဒါမှမဟုတ် သီးခြား အဖွဲ့လေးတွေကနေ အဲဒီလို ဆာဗေးလေးတွေကို စနစ်တကျ ကောက်ကြတယ်။ ဘာအကျိုးထူးလဲဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ ဘယ်ဟာကို ဘယ်လောက် အားပေးတယ် ဆိုတာ သိလာရတယ်။ လူသုံးများတယ်ဆိုတာ သူ့စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းလို့လို့ ၈၀% လောက် အတိအကျ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါမျိုးတွေမှာ ဆိုရင်တော့ သူသုံးထားတဲ့ နည်းပညာ၊ သူ့ရဲ့ Algorithm ဘယ်လောက် ကောင်းတယ်ဆိုတာ မှန်းဆလို့ ရမယ်။ နှိုင်းယှဉ် လေ့လာလို့ ရမယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရော?။ ဆက်သွယ်ရေးက အချက်အလက် တချို့နဲ့ ကျွန်တှော့ရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ မြန်မာပြည်မှာ ၂၀၀၈ အတွင်း အင်တာနက် အသုံးပြုသူပေါင်း သုံးသိန်းအထက် မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ လူဦးရေ သန်းငါးဆယ်ရှိတဲ့ မြန်မာပြည် အတွက်ဆိုရင် တစ်ရာခိုင်းနှုန်းတောင် မရှိသေးတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ နောက်ပိုင်း တိုးပွားလာဦးမှာပဲ။ အဲဒီအခါ မြန်မာ Search Engine တွေဘာတွေ ပှေါလာတော့မယ်။ မြန်မာ ယူနီကုဒ် Range လေးတစ်ခု ပေးပြီးတော့တော့ Search Engine တစ်ခု ဆောက်လို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘာတွေ လိုမလဲ။ ဒါကတော့ လျှို့ဝှက်။ Hint အနေနဲ့ ပြောရရင် Myanmar Data Set တွေဆိုပါတော့။ တခါတုန်းက အချို့အချို့သော လူပုဂဿဂိုလ်တွေ၊ ဆရာတှောတွေ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ စာအုပ် အဟောင်းလေးတွေ ရှိတယ်။ ရှားလည်းရှားတယ် ပြန်လည်း မထွက်တော့ဘူး။ အဲဒါတွေကနေ အရမ်းကောင်းတဲ့ အကြံတွေ ရခဲ့တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူ ရခဲ့တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် တန်ဖိုးထားပါတယ်။
ဒါလေးကလည်း သိပ်ကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေပါပဲ။ Search Engine မှာ လူတွေ ဘယ်လို စကားလုံးတွေ ရှာကြသလဲဆိုတာ လေ့လာထားတာ။ စကားလုံး တစ်လုံးထဲက ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်။ နှစ်လုံးက ၂၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိတယ်။ သုံးလုံးကလည်း ၂ဝကျှော ရှိတယ်။ ဒါက ဘာကို ပြသလဲဆိုတော့ စကားလုံး အတွဲတွေ အတွက်ပါ Search Indexing ဘယ်လောက်လုပ်ဖို့ လိုမယ်ဆိုတာကို ပြတယ်။ အဲဒီမှာ Algorithm ဆိုတာ အရမ်းအရမ်း အရေးကြီးလာရော။ မြန်မာစာက စပေ့(စ်) Space မရှိဘူး။ ဘယ်လိုမျိုး အထိကို စကားလုံးတွဲလို့ သတ်မှတ်မှာလဲ ဆိုတာတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလာပြန်ရော။ ဝင်ငွေမကောင်းပေမယ့် စိတ်ပျှောစရာကောင်းတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။ အခုတော့ အလုပ်ဖြစ်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောင် ၅နှစ်ပေါ့။ :)
Ref: Search Insider
Posted by NLS at 3/13/2009 10:52:00 AM0comments Links to this post
Labels: Idea, NLP, Statistic, Thought
ပြေပြေပြောရင် ပြေးရတတ်တဲ့ အဖြစ်များ
ဝေဝေဝါးဝါးနဲ့ ဝေးသွားတဲ့ကိစဿစတွေကလည်း အများကြီးပါ
ပြာပြာသလဲ လုပ်ရလွန်းတဲ့ကိုယ်လည်း တဖြည်းဖြည်း ပြားလာခဲ့
ပီပီပြင်ပြင် လုပ်တိုင်းလည်း မပြီးပြတ်တာတွေ အများကြီး
စီစီစဉ်စဉ် လုပ်တိုင်းလည်း အစီးမကပ်တာတွေက အများကြီး
ဆန်ရင်းစုန်ရင်း အဆုံးမှာ အဆန်းပြားဆုံးအရာ တွေ့မလားရှာမိတော့
မှန်တိုင်းလည်း မှန်းသလောက်တော့ မဖြစ်တာသိပြီ
ခံရလွန်းလို့ ဦးနှောက်တွေလည်း ခန်းလာပြီ
နာနာကျင်ကျင်နဲ့ နားနားနေနေသာ နေချင်ပါတော့တယ်
ခွေခွေလေးနေရင် ခွေးဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်း တွေးရင်းပေါ့။
PS: မြန်မာစာ မျိုးတူစုတွေခွဲရင်း စိတ်ကူးပေါက်လာလို့ ရေးမိတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ စိုင်းဝင်းမြင့် ပြောသလို များများ မြန်မြန်လေး ရေးလိုက်မိတယ်။ သိပ်တော့ မရှည်ဘူး။ တိုတိုလေးနဲ့ တိုးတိုးလေးပါ။
Fixed date 2009 instead of 2008. Thanks Guest!
Fixed ပီပီပြင်ပြင် instead of ပြီပြီပြင်ပြင်. Thanks Ma May! :)
Posted by NLS at 3/13/2009 12:13:00 AM0comments Links to this post
မန်ယူ အင်တာ ဘောပွဲကြည့်အပြီး အင်တာနက်လေး တက်သုံးမိတော့ အရမ်းအရမ်း အူထဲ ကလိကလိ ဖြစ်လာရလောက်အောင် ရယ်ချင်တာလေး တစ်ခု ဖတ်လိုက်မိလို့ တကူးတကကို ဒီအထဲ ရေးထည့်ထား လိုက်တယ်။ အခုပြောနေရင်းနဲ့ကို ရယ်နေမိသေးတယ်။ ကျွန်တှော အင်တာနက် စသုံးတာ ၂၀၀၄ ဆိုတော့ မြန်မာ့အင်တာနက် လောကကြီးကို ရှေ့မီနောက်မီ တှောတှောလေး မှီလိုက်သေးတယ်လို့ ပြောရမယ်။ MIRC တို့ ချတ်ရွမ်းတို့၊ ဖိုရမ်တို့ဆိုတာ အခုဘာဟုတ်သေးလဲ.. တချိန်တုန်းက ဆိုရင်ပေါ့။ အင်းအင်း။ နောင်တချိန်တော့ အွန်လိုင်းပှေါက ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းများဆိုပြီး ရေးဦးမယ်။ စောင့်ဖတ်ဗျာ။ အခုတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ နောင် အနှစ် ၂ဝလောက် ကျရင်ပေါ့။ အှော ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တှော ရေးရင်တော့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို နာမည်လေးတွေနဲ့ တိတိကျကျ ရေးမှာပါ။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ တချိန်တုန်းက သူတို့ သူတို့ သူတို့တွေ အွန်လိုင်းမှာ ဒါတွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ နောက်လူတွေသိအောင် ကျွန်တှောက မှတ်တမ်းလေး တင်ခဲ့ချင်တာပါ။ အကုန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တှော သိသလောက်ပေါ့လေ။ အခုတော့ အူတက်တော့မယ်။ တှောပြီ အိပ်ပြီဗျာ။
PS: ဘာလဲလို့ လာမမေးနဲ့ဗျိုး၊ မေးလည်း ကျွန်တှောက ပြောမှာမဟုတ်၊ ပြောလည်း ခင်ဗျားတို့ သိမှာမဟုတ်။
မန်ယူ ၂-၀ အင်တာ
အာဆင်နယ် ၇-၆ ရိုးမား
ဘာစီလိုနာ ၅-၂ လိုင်ယွန်
ပှေါတို ၀-၀ အတလက်တီကို
Posted by NLS at 3/12/2009 05:28:00 AM0comments Links to this post
လှန်တိုင်း ကိုက်တတ်တယ်ဗျလို့ မထင်ကြပါနဲ့ (အကဿငျီလက်)
ချေးအထပ်ထပ်နဲ့ ဆိုလည်း ရှောင်တယ်
ပွေးအကွက်အကွက်နဲ့ ဆိုလည်း ရှောင်မယ်
ညည ထထ စတတ်တာဆိုးတယ်
အဲဒီက ဟှောတယ်တွေလည်း သူ့ဆို မုန်းလှပြီ
နောင်...နောင်... နောင်...ပေ....နောင်.... (ဗိန်းဗောင်းသံဆင့်စေ)
PS: ၂၀၀၆ လောက်တုန်းကရေးတဲ့ ရယ်စရာ မောစရာ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ အခုချိန် ပြန်ရေးခိုင်းတောင် ရေးနိုင်တော့မယ် မထင်ဘူး။ ဪ အထက်ကလို ချစ်စရာ ဗန်ပိုင်းယားလေး လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီနေရာမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တှောကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ အကောင်လေးပါ။ [Cute Monkey Vampire Tutorial]
Posted by NLS at 3/11/2009 07:34:00 PM0comments Links to this post
၃ ရက်လောက် ဖျားတယ်ဗျား။ (သွေးရဲရဲ သံရဲရဲ ဒဏ်ရာပြင်းထန်တာ မြင်လိုက်ရလို့)
PS: မကြာသေးမီကမှ မဂဿငလာဆောင်သွားသော ခြသေဿင့ကျွန်းကြီးမှ ကိုကယ်လဗျင်နဲ့ မနှင်းဆီ အမှတ်တရ။ :D
Posted by NLS at 3/11/2009 07:20:00 PM0comments Links to this post
Labels: Friend, Poem
ဒီဇာတ် ပြန်မကရတော့ဘူး ထင်နေတာ
ရမ်းရွာစား ကုလားဘုရားလိုလှည့်။ (ဒုံ ချပ် ချပ်. ဒုံ ချပ် ချပ် )
အဟင့်ဟင့် .. တွေးမိရင်ဖြင့် ငိုချင်တယ်
ပိုတယ်လို့ မပြောနဲ့ ကိုကိုရယ်
ကိုကိုက လက်ပံပွင့်လေးတွေ ခူးပေးတယ်
မမော့နဲ့ကွယ် ဒီအရေတွေကိုဆိုပြီး ပြောထားလျက်နဲ့
အခြောက်ကြီးဆီက ခိုးထားတဲ့ ပုဆိုးရယ်ကမပါ
အားကိုးရာရှာပြီး နီးရာ အရပ်
ဂျီ့ အိမ်ပှေါသို့ ပြေးကာတက်
ရွာတစ်ရိုး လုံးတီး ဒိုးနေတဲ့ ရှင့်ကို
ဒါသက်သက် လုပ်တာပဲလို့ ပြောမိတော့
နောက်နေ့မှာ ရွာက ပျောက်သွားတယ်။
ဂျီအသည်းကို ကစား ပြီးမှ သူထားသွားတာလေ
ဘယ်ရမလဲ အိပ်ယာထဲ လဲပြလိုက်တော့
ရွာက လူမိုက် မောင်ဗိုဒ်ကလေးကို အသာခှေါ
ကြိမ်နဲ့ အပြတ်သာ ဆှောခဲ့ဖို့ မှာတယ်လေး။
(နှဲကို ပျော့ပျော့ မှုတ်တတ်တဲ့ ရွာစား လက်တဆစ်လျှော့ ... ဒီတစ်ခါတော့ အလွမ်းတေးသံလေးနဲ့ ချော့)
(စည်တို ကယ်လ်ဗင် ရေခင်းသံလေး အရင်ဝင်၊ ပြီးရင် ဒစ်စကိုပြောင်းပြီး အရက်သမား တီးလုံးလေးနဲ့ နှက်)
ရင်မှာတမြေ့မြေ့ တငွေ့ငွေ့ ဖြစ်နေဆဲမှာလေ
ရွာလမ်းတလျှောက် ထန်းခေါက်ဖာလေး ထမ်းလို့လာ
ရော့ ဒီမှာ သက်သေဆိုပြီး
သူများဆီက မနဲ ပြန်ခိုးခဲ့ရသတဲ့လေ
(ပတ်ဆရာဂျေ မျက်ရည်တွေ ဝေစေဖို့အရေး ဗျောသံလေးနဲ့ ညှင်းညှင်းသွင်း)
အဲဒီနေ့က အဖြစ်တွေ တစ်လုံးမကျန်ပြန်သတိရ
ဪ ဂျီပါမမ တရားသံဝေဂရ
တရားတဘောင်နဲ့ မျှအောင် နေတော့မဟဲ့ဆိုပြီး
(ကားဆွဲ ကိုဝှိုက် အိပ်ငိုက်မနေနဲ့၊ မဂျီပါ ပြန်မနှိပ်ခင် ၊ ကားလိပ်ကို အမြန်ပိတ်စေ)
ခေတ်သစ် သုဘဒဿဒါ ဇာတ်ထုတ် ပြီး၏။
(အမကြီးများကန်တော့၊ လျှာရှည်ပြီး ပါစပ်နဲ့လက် ဆော့မိတာ၊ မငြူစူခွင့်လွှတ်၊ အပြစ်ရယ်က လွတ်စေဖို့၊ အရမ်းသွက်တဲ့ မောင်လင်းဆက်ရဲ့ တောင်းဆု ပနဿနက်)
ဒီကဗျာလေးကလည်း နေ့တစ်မှာ ကဗျာတွေ ရေးကြတုန်းက စပ်ထားတာလေးပါ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အချေအတင် ရေးကြ ခုတ်ကြ နှက်ကြ ငြင်းကြရင်း ဒီကဗျာလေး ဖြစ်လာတာ။ ဇာတ်ကောင်တွေက အပြင်မှာ အလွန်ခင်မင်စရာ ကောင်းသူတွေပါ။ သို့ပေမယ့်လည်း ကဗျာထဲမတော့ ရတုန်းအချိန်လေး နှက်မိသပေါ့။ ကန်တော့ ကန်တော့။ :D နေ့တစ်ဖိုရမ်မှ မိတ်ဆွေများ အမှတ်တရ။ Dedicated to..
သတို့သား တစ်လနွမ်းကြီး ကိုကယ်လဗျင်အလက်ဇန်းဒါး
အမကြီး မဂျီပါ (နာမည်ကျှော စာရေးဆရာမ တစ်ဦး)
မန်းကနက်က ဂီတဖခင်ကြီး ဆြာဂျေ (အေမောင်ကြီးမပါ)
Posted by NLS at 3/11/2009 06:55:00 PM0comments Links to this post
Oboist Sein Mya Po (နှဲစိန်မြပို)
မြန်မာဆိုင်းဝိုင်း တကိုယ်တှော လက်စွမ်းပြ
Rar | 80Mb | 256Kb
Posted by NLS at 3/10/2009 10:52:00 AM0comments Links to this post
ဆောင်းရယ် နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ်
Rar | 75Mb | 256K
PS: See more mirror links in Comment. Thanks everyone for helping.
Posted by NLS at 3/09/2009 10:42:00 PM0comments Links to this post
Labels: Download, Song
Rar | 91Mb | 256Kb
Posted by NLS at 3/09/2009 09:47:00 PM0comments Links to this post
Labels: Download, Mandalay, Song
Rar | 96Mb | 256Kb
Posted by NLS at 3/08/2009 08:32:00 PM0comments Links to this post
Rar | 107Mb | 256Kb
Posted by NLS at 3/08/2009 12:24:00 PM0comments Links to this post
Rar | 82Mb | 256Kb |
အင်တာနက်ပှေါ မွှေရင်းနှောက်ရင်း အဖိုးတန်တဲ့ မြန်မာတီးလုံးခွေလေးတွေ တွေ့လို့ ထပ်ဆင့် ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တှော ပုဂံသွားတုန်းကဆို အဲဒီ သီချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့ဗျာ။ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း အင်မတန်မှ နားဝင်ချိုပါတယ်။ သီချင်းနာမည်နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာတွေ အနေနဲ့လည်း ဒီသီချင်းလေးတွေ ကြားရတဲ့အခါ ငါမြန်မာပါလားဆိုပြီး ဂုဏ်မယူနိုင်ရင်တောင်မှ သတိတရ လွမ်းဆွတ်မိကြမှာ အမှန်ပါ။ သီချင်းတွေက အတီးသက်သက် Instrumental လေးတွေပါ။ ကံဆိုးတာက ကျွန်တှောတွေ့တာလည်း Rapidshare လင့်ခ်တွေပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း အိမ်က ကွန်နက်ရှင်နဲ့ ဒေါင်းလုဒ်တောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အဆင်ပြေတဲ့သူတွေ အခြားတစ်နေရာမှာ တင်ပေးရင်တော့ Rapid မသုံးတတ်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေမှာ အမှန်ပဲ။ သီချင်းစာသား တွေကိုတော့ နောက်ပိုင်း အချိန်ရရင် ကျွန်တှော ရှာပြီး တင်ပေးပါဦးမယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကျွန်တှော ခရီးသွားနေတယ်။ အဲဒီကာလမှာ ဒီကို ရောက်လာသူတွေ အသစ်တွေ့ရအောင် အလိုအလျောက် ပိုစ့်တွေ တက်အောင် လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ပျှောရွှင်ပါစေ။
Posted by NLS at 3/08/2009 11:56:00 AM0comments Links to this post
၂၁ရာစု ကြက်ဆူစိုက်သမားကြီးများ တေးသံ
ဇီးပြားလေးစားလို့ ရည်းစားလေး ထားမိပါတယ်တဲ့
မျက်နှာမှာ ဘယ်လို ကျောက်တွေပေါက်လည်း
ပါးစပ်လေးရွဲ့လို့ တဖွဲ့တနွဲ့လည်း ပြောတတ်တယ်
ဒီကဗျာလေးက နေ့တစ်မြန်မာ ဖိုရမ်မှာ အတှောကြီး စည်ပင်ခဲ့စဉ် ကာလက မနဿတလေးက သူငယ်ချင်းများနဲ့ အပြန်အလှန် စာတွေရေးပြီး စပ်ခဲ့တဲ့ အိုင်ပျက်လေးပါ။ အခု နဲနဲပြင်ပြီး ပြန်တင်လိုက်တယ်။ ဒါလေးကို မနည်း ပြန်ရှာထားရတာ။ မနဿတလေးက သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အမှတ်တရပေါ့။ ကျွန်တှောက ကဗျာတွေ အားလုံးထဲမှာ အိုင်ချင်းကို သိပ်ကြိုက်တယ်။ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ သူများတွေကပြောတယ် အိုင်တွေ့ရင် ခြေဆေးချင်သတဲ့။ ကျွန်တှောကတော့ စာအုပ်ထဲ ရေးကူးထားချင်သူပါ အဟုတ် :D
နေ့တစ်မှာ ကျွန်တှောတို့ သူငယ်ချင်းများ အပြန်အလှန် စခဲ့နောက်ခဲ့ စာချိုးခဲ့တာတွေကို ဖတ်ချင်ရင် ဒီနေရာကို ရဲရဲကြီး နှိပ်လိုက်ပါ [လက်တန်းကဗျာစပ်ရအောင်]
Posted by NLS at 3/07/2009 08:45:00 AM0comments Links to this post
ကျွန်တှော့ဆီကို ဒီနေ့ ရောက်လာတဲ့ ဖှောဝါဒ်မေးလ် တစ်စောင်ပါ။ စာရွက်စာတမ်းတွေ ကောက်ရထားလို့တဲ့ ပိုင်ရှင်ကို လိုက်ရှာနေတာ။ စကဿငာပူကဆိုတော့ သိတဲ့သူရှိရင် လက်တို့လိုက်ကြပါဗျာ။ ဖုန်းနံပါတ် လိုအပ်တယ်ဆိုရင် ပြောပြပေးပါမယ်။
I found Ma Kay Thi Oo's educational certificates at singapore food court and could not able to get her direct contact. I found there isarecommendation letter from Asia World Port management. So, I am wondering you may know her contact address at Yangon. If you know her contact in Ygn, could you please inform this info to her. I will keep her certificates for the time being.
Name: Ma Kay Thi Oo (Father- U Phone Myint)
Job Title: Senior Accountant from 1Oct 2003 to July 2007 at Asia world.
Recommendation signed by U Sein Than.
Thant Cin Kyaw
Posted by NLS at 3/06/2009 01:59:00 PM0comments Links to this post
တှောတှောကြာပါပြီ ရင်ထဲကို ရောက်နေခဲ့တဲ့ ကိစဿစလေးတစ်ခု။ ယေဘုယျကတော့ ကိုယ့်ရေးတဲ့စာကို နှစ်သက် သဘောကျလို့ ကူးယူတယ် တခြား ဘလော့ဂ်မှာ၊ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ ဖှောပြတယ် ဆိုတာ ကျေးဇူးတင်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ကိစဿစပါ။ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတင်ခြင်း မတင်ခြင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အခြား Technical & Ethical ကိစဿစလေးတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီလိုမျိုး လုပ်တာဟာ ကျေးဇူးတော့ တင်ချင်စရာ ကောင်းပါရဲ့ ဒါပေမယ့် ဒါကို လုပ်သင့်လား မလုပ်သင့်ဘူးလား ဆိုတာလေးပေါ့။ သိနေပြီးသား ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ပေမယ့် ပညာရှိ သတိမမူမိဘဲ လစ်ကွက်လေးတွေ ကျန်နေသလားလို့ ကျွန်တှော စဉ်းစားမိတာလေးတွေ ပြောပြတာပါ။
ရေးတဲ့သူဟာ အချိန်၊ ပိုက်ဆံ၊ ခံစားချက်၊ အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရင်းနှီးပြီး စာတစ်ပုဒ်ကို ရေးထားတယ်။ ကိုယ်က Copy & Paste လေးလုပ်တာဟာ မြန်မြန်နဲ့ အလွန်လွယ်ကူစွာ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုပေမယ့် မူလရေးသူ ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ၊ အားထုတ်မှုတွေကို စာနာ လေးစားဖို့ လိုပါတယ်။
စာတစ်ကြောင်း (သို့) စာတစ်ပိုဒ် ကူးယူ ဖှောပြတာဟာ ကိုးကားတာ၊ ရည်ညွှန်းတာလို့ နာမည်တပ်လို့ ရပေမယ့် တစ်ပုဒ်လုံးကို ကူးယူတာဟာ Plagiarism သဘောမျိုး သက်ရောက်ပါတယ်။ ဒါက လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ ပြောတာပါ။ အင်တာနက်ပှေါမှာ Content Stolen လို့ ပြောပါတယ်။
တူညီတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ထဲကို နေရာမျိုးစုံမှာ တွေ့ရတဲ့အတွက် Search Engine မှာ Rank ကျစေပါတယ်။ မူရင်းပိုစ့် အနေနဲ့ ရသင့်တဲ့ Rank ကို မရတော့လို့ အင်တာနက်ပှေါမှာ တန်ဖိုးကျသလို ထပ်မံကူးယူဖှောပြတဲ့ ဆိုဒ်တွေ အနေနဲ့လည်း ကျပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက် မကောင်းပါ။
အင်တာနက်မှာ Content ဟာ အရေးပါပါတယ်။ အဲဒီ Content ဖြစ်အောင် စာရေးသူတွေဟာ အချိန်ကုန်ခံပြီး ဖန်တီးကြရပါတယ်။ အဲဒါကို ကိုယ်က အလွယ်တကူ ယူပြီး ကိုယ့် ဘလော့ (သို့) ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ ဖြည့်တာဟာ တရားလား မတရားလား စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
သူများစာကိုကူးယူပြီး ကိုယ့်နာမည်တပ် ဖှောပြသည် များကိုတော့ ဘာမှ မပြောလိုပါ။ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ်ရေး သူ့သမိုင်းသူရေး ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပြောချင်တာလေး တစ်ခုက ကြိုက်တာ မကြိုက်တာ တင်တာ မတင်တာ စှောကားတာ ချီးကျူးတာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို Duplicate တင်တာတွေဟာ Content ကို ထိခိုက်စေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါလေးကို အလေးအနက်ထား စေချင်တာပါပဲ။
မြင်သာအောင် ဥပမာ တစ်ခုလောက် ကျွန်တှော ပေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တှောက ရတနာနတ်မယ် အကြောင်းကို တှောတှောလေး အပင်ပမ်းခံ မွှေနှောက်ရှာဖွေပြီး ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေဆို ကာယကံရှင်တောင် အံ့အားသင့်ခဲ့ ရတာပါ။ သူတောင် ကျွန်တှောပြမှ အဲဒီပုံတွေ ပြန်တွေ့ခဲ့ရတာ။ ထားပါတော့။ ဂူဂယ်မှာ ရတနာနတ်မယ် လို့ စာရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ရင် Search Engine က အခြားသော အချက်အလက်ပေါင်း များစွာကို အကြောင်းပြုပြီး ကိုယ့် မူရင်းပိုစ့်ကို Priority မပေးဘဲ ကူးယူထားတဲ့ ဆိုဒ်တချို့ကို ရှေ့တန်းတင် ဖှောပြပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ ဆီကတော့ အွန်လိုင်းကနေ ဘာစီးပွားရေးမှ လုပ်လို့ရသေးတဲ့ အခြေအနေ မရှိတာမို့ အောင့်သက်သက် ဖြစ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာ ဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုးကို အပြတ် ရှုံ့ချကြပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ကိုယ့်ဘလော့ကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ အရင်တွေ့တဲ့ဆီကို ရောက်သွားတားကိုး။ တှောတှော ကြောက်ဖို့ ကောင်းသလို ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ ကိစဿစတွေပါပဲ။
ဒီတော့ ဒါတွေကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းသင့်သလဲ။ ကိုယ်က အခြားသူတစ်ယောက် ရေးထားတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို တွေ့တယ်ဆိုရင် တစ်ပိုဒ် တစ်ပါဒမျှ ကူးယူပြီး ဘယ်လိုကြောင့် ဘာကြောင့် ကြိုက်တယ်၊ အခြားသူတွေလည်း ဖတ်သင့်တယ် ဆိုပြီး ညွှန်းဆိုရင်ဖြင့် ကိုယ့်အထဲမှာလည်း မူရင်းစာကို Index လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သလို မူရင်းစာရေးသူကိုလည်း Credit အပြည့်အဝပေးရာ ရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးကို ကူးယူမဖှောပြတဲ့အတွက် အင်တာနက်ပှေါမှာ Content Duplicate ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင် ပါတယ်။ တခါတလေ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ကူးပြီး ဖှောပြချင်ရင်တောင် နဲနဲလောက် ပြောင်းလဲပြီးမှ ဖှောပြသင့်ပါတယ်။Copy Paste နဲ့ စာတစ်ပုဒ်လုံး ကူးပြီး တခြားနေရာမှာ ထပ်တင်တာမျိုးဟာ ချီးကျူးတယ် ထင်ရသလိုလိုနဲ့ တကယ်တမ်းမှာ ဒုကဿခပေးခြင်း တစ်မျိုး ပါပဲ။
ကျွန်တှော့ ပိုစ့်တွေကို အခြားနေရာတွေမှာ ဖှောပြပေးတဲ့သူတွေ အားလုံးကို အလွန် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တစ်ခုလို့တော့ ကျွန်တှော မယူဆမိပါဘူး။ ကျွန်တှော ကိုယ်တိုင်လည်း မသိခင်က တစ်ခါ လုပ်ခဲ့မိပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျွန်တှော မဖြစ်အောင် ရှောင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ အနေနဲ့ကတော့ ဘာဖီလင်မှ သိပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အထက်က အချက်လေးတွေကို သတိမမူမိဘဲ ဆက်လုပ်နေကြရင် ကြာရင် အားလုံးအတွက် မကောင်းတာမို့ ဒါကို ရေးပါတယ်။ စကားမစပ် ကျွန်တှော့ဘလော့ ညာဘက်အောက်ခြေမှာ ထားထားတဲ့ CC-NC-SA ဆိုတဲ့ လိုင်စင်နဲ့ ဒီပိုစ့်က အကြောင်းအရာဟာ မပတ်သက်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာဖတ်သူတွေဆီက အမြင်ကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြေပြေလည်လည်ပေါ့။
Posted by NLS at 3/05/2009 12:38:00 AM0comments Links to this post
Labels: Blogging, Thought
Posted by NLS at 3/04/2009 06:44:00 PM0comments Links to this post
Singapore စကဿငာပူနိုင်ငံရဲ့ အထိန်းအမှတ် Merlion ရုပ်တုကြီးကို ဖေဖှောဝါရီ ၂၈ ရက်နေ့က မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့ အခုအခါ ပြန်လည် ပြင်ဆင်မှု လုပ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ မိုးကြိုးဒဏ်ကြောင့် ရုပ်တုမှာ ဘောလုံး တစ်လုံး အရွယ်အစား အပေါက်ကြီး ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီး ဦးခေါင်းပိုင်းက အချို့အစိတ်အပိုင်းတွေလည်း မြေပှေါပဲ့ထွက် ကုန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖြစ်ပွားချိန်ဟာ ညနေ ၄နာရီ နဲ့ ၅နာရီ ကြားမို့ လာရောက်လည်ပတ်သူတွေ သိပ်မရှိသေးချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ ညနေ ၆နာရီ နောက်ပိုင်း ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို လူအချို့ အနဿတရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် မှာတော့ အဲဒီနေရာကို လည်ပတ်ခွင့် ပိတ်ပင်ထားပြီး ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ (အတိတ်နိမိတ် ယုံကြည်သူတွေကတော့ ဒါဟာ စကဿငာပူရဲ့ အနာဂတ်ကို သတိပေးနေတာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ဖန်းရွှေ ဆရာတစ်ယောက်က ဒါဟာ စကဿငာပူ တောင်ပိုင်းမှာ ပြသဿသနာ တစ်ခုခု ဖြစ်နိုင်တဲ့ အတိတ်နိမိတ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ကတော့ ဒါဟာ စကဿငာပူအနေနဲ့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ပိုမို ကြီးပွား တိုးတက်မယ့် လကဿခဏာလို့ ဆိုနေကြလေရဲ့။)
Posted by NLS at 3/04/2009 06:24:00 PM0comments Links to this post
လတ်ဆတ်ခြင်းကို သစ်ရွက်များ မစွန့်ထုတ် နိုင်တော့ပြီ
အကြောရောဂါနဲ့ ခေါင်းတွေဟာ တဆတ်ဆတ်ညိမ့်တတ်လာ
လွမ်းတဲ့အခါ သတိရစရာ မိုနာလီဇာမရှိ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် နားရွက်ဖြတ်မယ့် ဗင်းဆင့်လည်း မရှိ
ပရိုမီးသီးယပ်ကို ကယ်တင်သူ ဟာကျူလီမရှိ
လက်တစ်ချက်လှုပ်တိုင်း လူတွေကို ရင်သပ်ရှုမောစေတဲ့ တိုက်ဂါးဝုဒ်လည်းမရှိ
ကျွဲရဲ့ကျောပှေါက မှက်ရဲကြီး ဆိုကရေးတီးလည်း မရှိ
ဒီလူတွေ မရှိတာ ကြာခဲ့ပြီပဲ
လတ်ဆတ်ခြင်းကို သစ်ရွက်များ မစွန့်ထုတ် နိုင်တော့ပြီ။
Posted by NLS at 3/03/2009 07:14:00 PM0comments Links to this post
အချိန်ရတုန်းလေး ပြေးပြီး Myanmar Blog Directory ကို Update လုပ်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ထားတဲ့ နေ့ကစလို့ အသစ်သွင်းထားတဲ့ လင့်တွေက
လင့်တွေ စနစ်တကျမပေးဘဲ ပရိုဖိုင်တွေပဲ လာထည့်ထားတဲ့ သူတွေကိုတော့ ကျွန်တှော ချန်ထားခဲ့ရပါတယ်။ လိုက်မစစ်နိုင်လို့ပါ။ မိမိတို့ရဲ့ ဘလော့(ဂ်)ကို ထည့်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာ မပေးပါနဲ့။ Myanmar Blog Directory မှာသွားပြီး ပေးကြပါလို့။
Posted by NLS at 3/02/2009 11:04:00 PM0comments Links to this post
MC=1st Level Medial of Consonant
VC=1st Level Vowel of Consonant
KC=1st Level Killer of Consonant
VMC= 2nd Level Vowel of MC
KMC= 2nd Level Killer of MC
DMC= 2nd Level Diacritic of MC
KVC= 2nd Level Killer of VC
DVC= 2nd Level Diacritic of VC
DKC= 2nd Level Diacritic of KC
KVMC= 3rd Level Killer of VMC
DVMC= 3rd Level Diacritic of VMC
DKMC= 3rd Level Diacritic of KMC
DKVC= 3rd Level Diacritic of KVC
DKVMC= 4th Level Diacritic of KVMC
လူပြိန်းတွေး တွေးမိတာလေးတွေပါ။ ကင်းစီးတွေ၊ အထပ်တွေ၊ Inde Vowel တွေအကြောင်း မပါသေးဘူး။(မပါသေးဘူးဆိုတာ မရေးချင်သေးလို့ပါ နဲနဲဆက်စမ်းလိုက်ဦးမယ်:)) ဒီလိုဆိုရင် ဘာပြီးရင် ဘာလာမယ် ဆိုတာကို ကွန်ပျူတာကို လေ့ကျင့်ပေးထားရုံနဲ့ Priority အများဆုံး ကောင်တွေ တက်လာမယ်။ Frequency ကိုတွက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံးကောင်တွေကို စီပေးနိုင်မယ်။ တိုးပွားလာမယ့် စကားလုံးတွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုရောက်ရင် လက်ခံနိုင်မယ်။ Next Character ဘာဖြစ်နိုင်လဲ ဆိုတာကို တွက်ပေးနိုင်မယ် (See Burglish Algorithm) Regular Expression မှာထည့်ရင် Searching မှာ ပိုမြန်လာမယ်။ Syllabel Break အလိုလို ပြီးနိုင်တယ်။ Longest Matching ကို တွက်ဆလို့ ရလာမယ်။ လုပ်နေတဲ့ သူတွေကတော့ သိပြီးသားတွေ ဖြစ်မှာပါ။ သူတို့အတွက် မရည်ရွယ်ပါဘူး။ ကိုယ်တွေးမိတာလေး ချရေးမိတဲ့ သဘောပါ။
Posted by NLS at 3/02/2009 09:24:00 PM0comments Links to this post
Labels: Idea, Language, NLP
ကျွန်တှော တှောတှောလေး စိတ်ပျက်နေပါတယ်။ ကျွန်တှောတို့ ရပ်ကွက်မှာ မီးမလာတာ အရမ်းကြာနေပြီ။ ဒါတောင် တိုက်က ကိုယ့်မီးစက်နဲ့ကိုယ် ညနေ ၆နာရီကနေ ၁၁နာရီအထိ ပေးထားလို့ မီးလေး တွေ့တွေ့နေရတာ။ လျှပ်စစ်က လူတွေကလည်း တကယ်လည်တယ်။ တစ်ရက်လုံး မီးပျက်နေတယ် မဖြစ်အောင်တော့ လာရမယ့် အချိန်ဆို ၁ဝမိနစ် ၁၅မိနစ်လောက် ခဏ လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ ပြီးရင် ပျက်ကရော။ တကယ်ကို ၁ဝမိနစ် ၁၅မိနစ်ပါပဲ။ အဲဒီတော့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် မီးပျက်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ ည ၁၁နာရီဆိုတာ တကယ်တော့ ကျွန်တှောတို့လို လူတွေ အလုပ်လုပ်စလုပ်တဲ့ အချိန်ပါ။ အခုတော့ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ အိပ်ယာထဲ ဝင်ရတာပဲ။ ကြာလာတော့ လူမမာ တစ်ယောက်လို ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် စိတ်ပျက်လာတယ်။ မအိပ်ချင်ဘဲ အိပ်နေရတဲ့ဘဝ။ ဘာမှထူးခြားမလာတဲ့ အရာတွေကိုလည်း ပြောမနေချင်တော့ဘူး။ မပြောချင်ဘူးဆိုတာက ပြောချင်စိတ်ကို ကုန်သွားတာ။ မီးပျက်တော့ ဖုန်းအိပ်ချိန်းတွေပါ လိုက်ပျက်တယ်။ ဖုန်းအိပ်ချိန်းပျက်တော့ အင်တာနက်လိုင်းပါ သုံးမရတော့ဘူး။ ကဲကျွန်တှော ဘာလုပ်ရမလဲ။ အဲဒီနေရာမှာ ဒီအဖြစ်မျိုးတွေကို မခံစားဖူးရင် ဒါမျိုး ကျွန်တှောတို့ရဲ့ စိတ်ပျက်မှုနဲ့ ဒုကဿခတွေကို ဘယ်လိုမှ နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တှောတို့ဆီမှာ VIP လိုင်းတွေ ဆိုတာရှိတယ်။ ဘယ်တော့မှ မီးမပျက်ဘူး။ အဲဒီ VIP မပြောနဲ့။ လက်ဝေခံ ရွှေတောင်ကြားထဲတောင် မီးမပျက်ဘူး။ ရွှေတောင်ကြားဆိုတာက ရှေးတုန်းက VIP ရပ်ကွက်ပေါ့။ အခုတော့ အဲဒီလူတွေဆီကနေ အခု ပိုက်ဆံရှိသူတွေက ဝယ်နေကြတော့ သူတို့ကတော့ VIP မဟုတ်တော့ပေမယ့် VIP အမွေ လက်ကျန်လေး ရလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဘယ်တော့မှ မီးမပျက်သလောက်ပါပဲ။ ပျက်ရင်လည်း မိနစ်ပိုင်းလောက်။ ဒီလောက်ပျက်ရင်တောင် အဲဒီအထဲကလူတွေ တဖြစ်တောက်တောက်နဲ့။ ပြောချင်တာက စိန်နားကပ် မပြောနဲ့.. ပါးကတောင် ပြောင်ထွက်နေတာကိုပါ။ ဘဝတွေ ကွာခြားပါဘိ။ ဆိုတော့ အဲဒီလူတွေဟာ သူတို့ဆီမှာ မီးအမြဲ လာနေတော့ မီးပျက်ခြင်းရဲ့ဒုကဿခကို ကျွန်တှော ခံစားနေရသလောက် သူတို့ကတော့ ထိန်ထိန်းငြီးငြီး အိမ်ကြီးထဲမှာ နေရင်း ဘယ်လိုမှကို သိနိုင်မှာ မဟုတ်သလို ခံစားလည်း ပေးကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးနေမိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒီလူတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ငါတို့တွေက သူများတွေလို အမှောင်ထဲ မနေဘူး၊ မင်းတို့များ ကံဆိုးလိုက်လေကွာ ဆိုပြီးတော့များ ကြံဖန် ဘဝင်မြင့် ပြောဆိုတာမျိုး ခံရလေမလား။ (ကံဆိုတာ လူကလုပ်တာ ဆိုတဲ့စကား သိပ်မှန်တယ်လို့ တလွဲပြောရင် ပြောနေဦးမှာ။ သူပြောတဲ့ လူဆိုတာက တခြားလူကို ပြောတာနေမှာ)။ ထားပါတော့လေ (ထားလိုက်ရတာတွေလည်း များနေပါပြီ)။ လူဆိုတာ ကိုယ်ခံစားရမှ နာတတ်ကြတာမျိုးကိုး။ စိတ်နာသူ မှတ်တမ်းထဲမှာ ကျွန်တှောဟာ ဇာတ်လိုက်ပါပဲ။
တှောပြီဗျာ။ အိပ်တော့မယ်။ လပ်တော့လေး အားမကုန်ခင် ရေးလိုက်ဖြစ်တဲ့ စာပါ။ မီးပျက်ပြီး ဖုန်းလိုင်းပါ ပျက်နေလို့ အဆင်ပြေတဲ့ နေ့မှပဲ တင်တော့မယ်။ စိတ်လေတယ်။
Posted by NLS at 3/01/2009 04:43:00 PM0comments Links to this post
Review on Myanmar Unicode 5.1
အသတ် နှင့် ရှေ့ထိုးကိစဿစ
ယူနီကုဒ် ၅.၁ အထိ အသတ်နဲ့ ရှေ့ထိုးကို တန်ဖိုးအတူတူ ပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အသတ်နဲ့ ရှေ့ထိုးဟာ အခုမှသာ ခပ်ဆင်ဆင် ဖြစ်နေပေမယ့် တကယ်က မတူပါဘူး။ ဒါ့အပြင် အသုံးပြုမှုခြင်းလည်း မတူပါဘူး။ အသတ်ဟာ ဗျည်းတစ်လုံးရဲ့ အသံကို သတ်ပစ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗျည်းမှာ တွဲကပ်တဲ့ သရအသံကို သတ်ပစ်လိုက်တာ လို့လည်း ပြောလို့ရတယ်။ ရှေ့ထိုးကတော့ အသံရှည် ဆွဲရာမှာ အသုံးပြုတာပါ။ ရှေ့ထိုးဟာ သီးခြား တစ်လုံးထဲ မရပ်တည်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်တမ်း သူက (ေ-ှာ) အှောသရပါ။ (ေ-ာ) သရမှာ သံရှည်ကို ပြချင်တဲ့အခါ သံပြောင်းပြဖြစ်တဲ့ ဝစဿစနှစ်လုံးပေါက် (:) ကပ်မလိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် ရှေ့ထိုးနဲ့ ပြတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ရှေ့ထိုးလို့ နာမည် တပ်လိုက်တာကလည်း အသတ်နဲ့ မတူဘူးဆိုတာ ပြောချင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
သဿသ (U+103F) နဲ့ (ဋဿဌ)
သဿသ (သကြီး) ဟာ (သ်+သ) ပေါင်းထားတဲ့ အကဿခရာပါ။ ယေဘုယျအနေနဲ့ ပုံစံတူ အကဿခရာ နှစ်လုံး အဲဒီလို ရှေ့နောက် တွဲဆက်လာရင် အထပ် ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ (ဥကဿကဋဿဌ)။ သဿသကို ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်း အသုံးပြုနေဆဲမို့ ယူနီကုဒ်မှာ ထည့်သွင်းတာကို ဘာမှ မပြောလိုပေမယ့် သဿသ ကို ထည့်ထားပြီးတော့ (ဋဿဌ) ဆိုတာကိုတော့ ထည့်ထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။ ဒီ (ဋဿဌ)ဟာလည်း အခုနက သဿသကြီးလိုပဲ ချုံ့ထားတဲ့ စာလုံးပါ။ ဋ်+ဌ=ဋဿဌ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် နှစ်ခုစလုံးဖြုတ်၊ ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါကိုတော့ ချန်ခဲ့တာ အဓိပဿပာယ် မရှိပါဘူး။
သေးသေးတင်ကို ဒီယူနီကုဒ်မှာ Various Sign ထဲထည့်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ဝေတဲ့ မြန်မာသဒဿဒါစာအုပ် စာမျက်နှာ ၂မှာ သေးသေးတင်ကို သင်ရိုးသရနဲ့ သရသကေဿငတထဲ ထည့်ထားပါတယ်။ အခြေခံ သရထဲတော့ ထည့်မထားပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ဆုံးထုတ် မြန်မာအဘိဓာန်စာအုပ်ထဲမှာတော့ အံ (သေးသေးတင်)ကို သရထဲ ထည့်ပါတယ်။ (စာ-ထ၊ ၅၀) အဲဒီမှာ အခြေခံသရကို အ၊ အာ၊ အိ၊ အီ၊ အု၊ အူ၊ အေ၊ အဲ၊ အော၊ အှော၊ အံ၊ အို ဆိုပြီး သရ ၁၂လုံး ပြပါတယ်။ အဲဒီ အခြေခံ သရ ၁၂လုံးကိုမှ မူတည်ပြီး Tone Mark အောက်မြစ်နဲ့၊ ဝိသဇဿဇနီ (း) ပွားပြီးလည်းကောင်း၊ အသတ်ဗျည်းများနဲ့ အရေးပွား၍လည်းကောင်း လိုအပ်သလို ချဲ့ထွင် အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေးသေးတင်ဟာ (အံ)သရ သာ ဖြစ်ရပါမယ်။ Various Sign ထဲထည့်ပြီး တခြား Tone Mark လို မထားသင့်ပါဘူး။ (သေးသေးတင်ကို (မ်)နဲ့ သွားသွား တူခိုင်းနေတဲ့ ကိစဿစကလည်း မြန်စာစာပေမှာ အပြတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း လုပ်သင့်တဲ့ ကိစဿစတစ်ခုပါ) ကွန်ပျူတာစနစ်ကို တက်လှမ်းမယ်ဆိုရင် ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုတွေ လုပ်လို့မရပါဘူး။ အုံ (အ သေးသေးတင် တစ်ချောင်းငင်) ဟာ အုမ် (အ တစ်ချောင်းငင် မသတ်) နဲ့ ကွဲပြားတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မြန်မာစာလုံး တစ်လုံးတိုင်းရဲ့ အဆုံးစွန်ဟာ Diacritic (Tone Mark) လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ သေးသေးတင်ကို Tone Mark လိုလို လုပ်မယ်ဆိုရင် သေးသေးတင် တစ်ချောင်းငင်ဆိုတာ အဓိပဿပာယ် မဲ့ပါလိမယ့်မယ်။ (ဟိုးတုန်းက နိဂဿဂဟိတ် ( -ံ) ကို ဗျည်းထဲမှာ ထည့်ကြတယ်။ အဲဒီလို ဗျည်းထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့အတွက် သူ့ကို သရထဲမှာ ထည့်မတွက်ဘူး။ အဲဒါကို ဗျည်းကနေ ထုတ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်း အခြေခံ သရအနေနဲ့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာ ကြာလှပါပြီ)
မြန်မာ ယူနီကုဒ်မှာ (၎င်း)ကို (၎င်း) တစ်လုံးထဲ ခွဲရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ ၎င်း ပြသဿသနာဟာလည်း ဆရာကြီး ဦးဖေမောင်တင်တို့ ခေတ်ကတည်းက အတှောရှင်းယူခဲ့ရတဲ့ ပြသဿသနာ တစ်ခုပါ။ လည်းကောင်းကို ချုံ့ရေးကြရာက အဲဒီ ၎င်း ပြသဿသနာ စလာတာပါပဲ။ ယူနီကုဒ်မှာ (၎င်း)ဆိုတာကို (၎င်း) နဲ့ (င်း) ဆိုပြီး ခွဲထားတာကတော့ လုံးဝ အဓိပဿပာယ် မရှိဘူး ထင်ပါတယ်။ ဒါဆို (၎င်း) အဲဒီ တစ်လုံးထဲကို ဘယ်လို အသံထွက်ရမလဲ ဆိုတာ ရှိလာပါပြီ။ ငသတ် ဝစဿစပေါက် မပါတဲ့အတွက် (လည်းကော)လို့ ထွက်ရမှာလား။ ငသတ် ဝစဿစပေါက် ထည့်ပါမှ လည်းကောင်းလို့ အသံပြည့် ထွက်မှာလား။ (လေးဂဏန်း) ဆိုရင်လည်း အသစ်သွင်းစရာ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ ဖြစ်သင့်တာကတော့ အဲဒီ (၎င်း) ကို (သဿသ)လို သီခြားအရေးရှိတဲ့ စာလုံးအနေနဲ့ ပြသင့်ပါတယ်။ (Unicode 4.1 မှာတုန်းက အခုလို မခွဲဘဲ တစ်လုံး အနေနဲ့ ထားရာက အခုကျမှ ခွဲထုတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်)
ဒီစာလုံးကို ယူနီကုဒ်မှာ (1035) Myanmar Vowel Sign E Above ဆိုပြီး ပြထားတယ်။ အဲဒီ စာလုံးကို သကဿကတဘာသာနဲ့ ရေးထားတဲ့ ရာဇမတဿတဏ်ကျမ်းမှာ ကျွန်တှော အများအပြား တွေ့ဖူးပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး ရှာကြည့်ချင်ရင်တော့ မြန်မာအဘိဓာန် စာမျက်နှာ (ထ) ဠ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြုဗဿဗာသာဠ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ မူရင်း သကဿကတစာကို အဲဒီ သဝေထိုး အပှေါတင်ပြီး ရေးပါတယ်။ အဲဒါဟာ မြန်မာစာလုံး မဟုတ်ပါဘူး။ သရဆိုတော့ သရအသစ်များလားဆိုပြီး မျက်စိတောင် လည်သွားပါတယ်။ (ရှေ့ထိုး)ကို ပြောချင်တာလားလို့လည်း တွေးမိပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူး။ တစ်ချိန်က ရှိခဲ့ဖူးတယ် ဆိုရင်တောင် နောက်ပိုင်း လုံးဝမသုံးတော့တဲ့ အရာကြီးပါ။ ဘာဖြစ်လို့ မြန်မာသရထဲ အတင်းထည့်ထားတယ် ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အသုံးလိုတိုင်း ယူနီကုဒ်မှာ လိုက်ထည့်နေမယ် ဆိုရင်လည်း တခြားထည့်စရာတွေ အများကြီး တိုးလာပါလိမ့်မယ်။
ဦ ဆိုတဲ့ သရကို ယူနီကုဒ်တန်ဖိုး 1026 သီးခြားပေးထားတယ်။ ပြီးတော့ သူ့အောက်မှာ ဒါဟာ (ဥ)+(-ီ) နဲ့ အတူတူပါပဲလို့လည်း ပြောထားသေးတယ်။ ဦဟာ သူ့တစ်လုံးထဲ သီးခြားရှိတဲ့ အမြင်ပုံစံပါ။ လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ်နဲ့ ပေါင်းထားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ (Normalization လုပ်ချင်လို့ အတူတူပဲလို့ သတ်မှတ်ထားတာလားလို့လည်း တွေးမိပါသေးတယ်) အသံထွက်တဲ့အခါ အူ ဆိုတဲ့ အသံကို ထွက်ပါတယ်။
ဒီသရကတော့ မကာရလောပအကျှော ခင်ကြီးဖျှော တီထွင်လိုက်လို့ ဖြစ်လာတာပါ။ ဒီတစ်လုံးထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ (အို) သရကိုလည်း သူပဲ စတီထွင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ့သရဟာ ၁၁လုံးပဲ ရှိတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ (-ံ)ကို ဗျည်းထဲ သွားထည့်ထားလို့ပါ။ တကယ်တော့ ဩသရကို (ေ-ှာ) ကပ်တယ်ဆိုတာ အဓိပဿပာယ်ကို မရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဩ ကိုယ်နှိုက်က မှီခိုကင်းတဲ့သရ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်တာက ခင်ကြီးဖျှောဟာ အသံထွက်အတွက် (အှော) သရကို ထည့်သွင်းချင်လို့ ဩ မှာ အနက်ထင်အောင် ပူးပြလိုက်ပုံ ရပါတယ်။ ဪ ဆိုတာ တကယ်တော့ မြန်မာမှုပြုရင် အှော နဲ့ အတူတူပါပဲ။ အထက်က (ဦ)မှာတုန်းက (ဥ)နဲ့(-ီ) ပေါင်းတာနဲ့ အတူတူပဲလို့ ပြပေမယ့် ဒီ ဪကျတော့ ဘာမှမတွေ့ရပြန်ဘူး။ အထက်ကလို သဝေထိုး+ဩ+ရေးချ+ရှေ့ထိုး လာရင်ရော အတူတူပဲလို့ သတ်မှတ်မှာလား။ သ+ရရစ် ဆိုရင်လည်း ဩနဲ့ အတူတူပဲလို့ သတ်မှတ်မှာလား။
တကယ်ဆို အဲဒီ သရတွေကို တစ်လုံးချင်းစီ အနေနဲ့ မမြင်သင့်ပါဘူး။ က+(အောသရ)=ကော၊ ခ+(အောသရ)=ခေါ ဖြစ်ပါတယ်။ သဝေထိုး+ဗျည်း+ရေးချ လို့ကျွန်တှော့ အမြင်အရဆို မသတ်မှတ်ချင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အထက်ကလို (ေ-ာ)(ေ-ှာ) ( -ို) (-ုံ) အတွဲအနေနဲ့ ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာအကဿခရာတွေဟာ ပိုလို့ အဓိပဿပာယ် ရှိလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ပိုပြီးလည်း လွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံး အကြံပြုချက်ကို ရေးချင်ပါတယ်။ ကုဒ်တွေကို မှန်ကန်ပါတယ်ဆိုပြီး ပညာရှင်တွေ လွယ်လွယ်နဲ့ လက်မှတ် မထိုးသင့်ပါဘူး။ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စစ်ဆေးပြီးမှ လက်ခံသင့်ပါတယ်။ မြန်မာယူနီကုဒ် ၃နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေတာတွေ အများအပြား မရှိသေးပါဘူး။ ရှိရင်လည်း အလွယ်တကူ Convert လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ တချို့ မှားနေတာတွေကို သိသိကြီးနဲ့ ပစ်မထားသင့်ပါဘူး။ လုပ်ပြီးသားကြီး ဖြစ်နေလို့လည်း မပြင်ဘဲ မနေသင့်ပါဘူး။ ဒါဟာ တမျိုးသားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိစဿစပါ။ နောင်ကာလကြာရှည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုကြရမယ့်ဟာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ပြီးတော့ အထက်ကပုံမှာလို ယူနီကုဒ်ဇယားဟာ အကဿခရာတွေဟာ ရောနေပါတယ်။ ယူနီကုဒ် စစလုပ်ချင်းတုန်းက ချန်ထားတဲ့ အကွက်တွေကို လိုက်ဖြည့်ရင်း ရောထွေးကုန်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဗမာ အကဿခရာတွေထဲ မွန်တွေ၊ ရှမ်းတွေ၊ ကရင်တွေ ရောက်နေတယ်။ တကယ်ဆို စနစ်တကျ သူ့အစုနဲ့သူ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အချိန်မနှောင်းခင် လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေ လုပ်နိုင်ကြစေဖို့ ကျွန်တှောအနေနဲ့ သိထားသမျှ၊ သံသယ ရှိနေတာ မှန်သမျှကို အပြုသဘောနဲ့ အကြံပြု ရေးသားပါတယ်။ (မြန်မာယူနီကုဒ်နဲ့ ဗမာစာရော၊ တိုင်းရင်းသားစာတွေနဲ့ပါ ဒေတာ အများကြီး မရှိသေးခင်မှာ စနစ်တကျ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် ပြန်လည် စီသင့်တယ်လို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းပါတယ်)။
ကွန်ပျူတာသမားဟာ ဘယ်လောက် ကွန်ပျူတာမှာ တှောတှော မြန်မာစာကို သမရိုးကျ သိရုံလောက်နဲ့ ဒါကို လုပ်လို့ မရပါဘူး။ မြန်မာစာ ပညာရှင် အနေနဲ့လည်း ဘယ်လောက်ပဲ မြန်မာစာကို ထုံးလိုချေ ရေလိုနှောက် ကွန်ပျူတာရဲ့ လည်ပတ်ပုံ၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပုံ သဘောတရားတွေကို မသိရင် ဒါကို လုပ်လို့ မရပြန်ဘူး။ အဲဒီနှစ်ခုကို ညီညီမျှမျှ ပေါင်းနိုင်မှ ကွန်ပျူတာမှာ မြန်မာစာစနစ်ကို အကျယ်တဝင့် စနစ်ကျကျ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ပိုင်း ဘာသာဗေဒ ပညာရှင်တွေလည်း အရေးပါတဲ့ ကဏဿဍကနေ ပါလာရပါဦးမယ်။ အရေးအကြီးဆုံး တစ်ချက်ပဲ ရှိတယ်။ အချင်းချင်းကြား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ လိုအပ်တာကို နားလည်သဘောပေါက်အောင် ပြောပြနိုင်ဖို့ အတွက်ကတော့ ကိုယ့်ဘက်က ဝမ်းစာပြည့်အောင် ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပျူတာခေတ်ပဲ မြန်မာစာက နည်းပညာကို လိုက်နာရမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာမျိုး တွေကိုတော့ ကျွန်တှောတို့ ရဲရဲကြီး ဆန့်ကျင်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက်။ ဒီသုံးသပ်ချက်ထဲမှာ ဗမာစာ သီးသန့် အပိုင်းကိုပဲ ထုတ်နှုတ်ဝေဖန် အကြံပြုပါတယ်။ အခြားတိုင်းရင်းသား အကဿခရာတွေ မပါသေးပါဘူး။ အကြမ်းထွက်တဲ့ ယူနီကုဒ် ၅.၂ မူကြမ်းမှာလည်း ထူခြားတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေကို မတွေ့မိသေးပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ယူနီကုဒ် ၅.၁ စနစ် တစ်ခုတည်း အပှေါမှာ အခြေခံထားတယ် ဆိုတဲ့ မြန်မာသရီး၊ မိုင်မြန်မာ၊ ပရပိုဒ်၊ ပိတောက် စတာတွေဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပြောင်းရာမှာ တူနေရမယ့်အစား Rendering မတူတာကြောင့် တလွဲတွေ ထွက်လာတတ်တာကိုလည်း စနစ်တကျ ဖြစ်စေချင်ပါသေးတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာ ဇှောဂျီ အသုံးပြုရခြင်းရဲ့ အားနည်းချက် တွေကိုလည်း သုံးသပ်ကြည့် ပါဦးမယ်။
အထက်က ကိစဿစတွေမှာ ကျွန်တှော့အယူအဆ မှားတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှားတယ် ဆိုတာကို တတ်ကျွမ်းသူ ဆရာများက အမှန်ပြင်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
Download: This Article
Download: Myanmar Unicode 5.1
View: Unicode 5.2
Posted by NLS at 3/01/2009 02:08:00 PM 1 comment Links to this post
Labels: Myanmar Unicode, NLP, Selection